HESHIIS DHACAY: Alisson oo u wareegaya kooxda Liverpool (Imisa ayay ku qaadanaysaa?) | Hadalsame Media
Home Ciyaaraha HESHIIS DHACAY: Alisson oo u wareegaya kooxda Liverpool (Imisa ayay ku qaadanaysaa?)
HESHIIS DHACAY: Alisson oo u wareegaya kooxda Liverpool (Imisa ayay ku qaadanaysaa?)
(Liverpool) 18 Luulyo 2018 – Warar badan oo ka imanaya England iyo Italy ayaa sheegaya in Liverpool ay aqbashay dalabka AS Roma oo ah €75m oo ay ku qaadanayso goolwale Alisson, iyadoo haatan ay tafaasiil yari uun harsan tahay.
Naadiga Ingiriiska ah ayaa shalay gaarey €60m iyo €10m lagu daray oo bareemiyo ah, taasoo u dhowayd dalabka Giallorossi, balse La Stampa iyo Sky Italia ayaa haatan sheegaya in Reds ay gaartey dalabka kooxda Yeeyda ama Lupi.
Dalabku guud ahaan waa €75m, iyadoo uu weriyaha La Stampa ee Matteo De Santis uu u kala dhigayo €60m oo lagu daray €15m oo bareemiyo ah.
Sky ayaa sidoo kale baahinaya, waxaana kaliya haatan harsan in laga xaajoodo qaabka loo bixinayo lacagtaasi iyo qaab dhismeedka bareemiyada.
Previous articleDAAWO: ”Waxaad u ekayd sidii baasto qoydey ee maxaad PUTIN ”selfie” uga codsan wayday” – Schwarzenegger oo dhulka ku jiidey Trump
Next articleWasaaradaha kalluumeysiga maamul goboleedyada oo sheegay inay joojiyeen wada shaqeyntii wasaaradda kalluumeysiga dowladda